नेपाली युवा जसको मेमोरी पावर कम्प्युटर भन्दा तेज, दिमागभित्रै २५ हजार फोल्डर बनाए-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – Khabar Silo
नेपाली युवा जसको मेमोरी पावरले यसरी हल्लायो संसार ! अर्पण शर्माले गिनिज बुकमा नाम मात्र लेखाएनन् अहिले १ लाख नम्बर सम्झन उनले आफ्नो दिमागमा २५ हजार फोल्डर बनाएका छन् !
हरेक परिक्षामा सफल हुन, क्यालेन्डर याद गर्न, कयौं फोन नम्बर कण्ठ पार्न उनको यस्तो जुक्ति रहेछ !
हेर्नुहोस हाम्रो कम्प्युटरमा भन्दा धेरै दिमागको फोल्डरमा के छ त्यस्तो
बझाङ बझाङका मुकेशराज जोशीले सबैभन्दा धेरै समय लगातार पढेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ । जयपृथ्वी नगरपालिका–८ जोशीगाँउका मुकेशराज जोशीले लगातार १ सय २४ घण्टा ३० मिनेट किताब पढेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हो ।गिनिज इभेण्टको आयोजनामा उहाँले साउन ५ गते बिहान ११ : ३० बजेदेखि पढ्न सुरु गर्नुभएको थियो । यसअघि सन् २००८ मा […]